↑ (2005) Pasta. UK: Parragon Publishing, 6–57. ISBN 978-1405425162။
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။